I-Broadsheet neTabloid Newspapers
Kwihlabathi lokunyathelisa i-journalism , kukho iifom ezimbini eziphambili zamaphephandaba-ama-spreadsheets kunye nama-tabloids. Ngokunyanisekileyo, loo migaqo ibhekisela kubukhulu beemviwo, kodwa zombini ifomathi nazo zinembali enemibala kunye nemibutho. Ngoko yintoni umehluko phakathi kweespredishithi kunye nee-tabloids?
I-Broadsheet ibhekiselele kwifom yephepha eliqhelekileyo, leyo, ukuba ulinganisa iphepha eliphambili, ngokuqhelekileyo lijikeleze i-intshi ezili-15 ubude ukuya kuma-intshi angamashumi ama-20 okanye ngaphezulu kwi-US (ubukhulu buyahlukahluka kwihlabathi.
Iipredishithi zikhulu kwamanye amazwe). Amaphepha apapashayo aqhelekileyo amakholethi ayisithupha.
Ngokomlando, ama-spreadsheets aphuhliswe kwi-18 leminyaka yeBritani emva kokuba urhulumente aqale ukuhlawula amaphephandaba ngokusekelwe kumanqaku amaninzi ayenayo, okwenza amaphepha amakhulu ngamaphepha amancinci angaphantsi.
Kodwa ama-spreadsheets nawo adibaniswa neendlela eziphezulu zokusasazwa kweendaba, kunye ne-readscale readership. Namhlanje, amaphephancwadi abanzi abavame ukusebenzisa indlela yendabuko yokuqokelela iindaba ezigxininisa ngokukhawuleza kwenkcazo kunye nefowuni ecacileyo kwinqaku kunye nama-editorials. Abafundi be-Broadsheet bavame ukuhlala becebile kwaye bafundiswa, baninzi babo abahlala kwiidolophana.
Amaphephandaba amaninzi ahloniphekileyo nakwimpembelelo - I-New York Times, iWashington Post, iThe Wall St. Journal, njalo-ke ngamaphepha ebanzi.
Nangona kunjalo, kwiminyaka yakutshanje ezininzi iipredishithi ziye zancitshiswa ngobukhulu ukuze kuphethwe iindleko zokushicilela.
Ngokomzekelo, i-New York Times yancinciwe ngo-1 1/2 intshi ngo-2008. Amanye amaphepha, kuquka i-USA Today, iLos Angeles Times kunye neWashington Post, sele isetyenziswe ngobukhulu.
Ngomqondo wobugcisa, i-tabloid ibhekisela kuhlobo lwephephandaba eliqhelekileyo lilinganisa i-11 x 17 intshi kunye neeklanu kwiikholam, ngaphantsi kwephephandaba le-widsheet.
Ekubeni ama-tabloids amancinci, amabali abo athambekele ukuba abe mfutshane kunokuba afumaneka kwi-spreadsheets.
Kwaye ngelixa abafundi besasaza bahlala be-upscale suburbanites, abafundi beetekisi bahlala behlala kwiindawo ezihlala kwiidolophu ezinkulu. Enyanisweni, abaninzi abahlali beedolophu bakhetha i-tabloids kuba kulula ukuyithwala nokufunda kwisitrato okanye ngebhasi.
Enye ye-tabloids yokuqala e-US yayinguNew York Sun, yaqala ngo-1833. Yayibiza kuphela ipenny, yayinzima ukuyithwala kwaye ingxelo yezophulo-mthetho kunye nemifanekiso yayibonakala iyathandwa ngabafundi abasebenzayo.
I-Tabloids ithambekele ekubeni yinto engabonakaliyo kwaye idibanise kwisimbolo sabo sokubhala kunabo abazalwana babo abakhulu. Kwibali lolwaphulo-mthetho, i-widsheet iya kubhekisela kwipolisa, ngelixa i-tabloid iya kumthiya ipolisi. Nangona i-widsheet isenokuchitha ezininzi iikhomitha zekholomu kwiindaba "ezinzulu" - zithi, ibhilidi enkulu ephikisana ngayo kwiCongress - ityala liyakwazi ukuba lingene kwibala elibuhlungu lobugqwetha.
Enyanisweni, igama eliyi-tabloid lidibene noluhlobo lwevenkile yokuhlola i-aisle yamaphepha-afana ne-National Enquirer-agxininisa kwiimbali ze-splashy, ezinomdla ngokuziwayo.
Kodwa kukho ukwahlukana okubalulekileyo okumele kwenziwe apha.
Enyanisweni, kukho i-tabloids ngaphezu kwe-top-like njenge-Inquirer, kodwa kukho nento ebizwa ngokuthi i-tabloids ehloniphekileyo-njenge-New York Daily News, i-Chicago Sun-Times, i-Boston Herald njalo-njalo ukwenza inzululwazi, ukubethela i-journalism. Enyanisweni, i-New York Daily News, eyona nto ibalulekileyo kwi-US, iphumelele i-10 Pulitzer Prizes , iphrinta imbeko ephezulu ye-journalism.
EBritani, amaphepha amaphepha - abuye aziwa ngokuba "amacwecwe abomvu" kwiibhanti zawo zamaphepha-phambili - ahlala ehlasele ngakumbi kwaye azivala kunabo baseMelika. Enyanisweni, iindlela zokunika ingxelo ezingenangqiqo eziqeshwe ngamanye amathebhu zakhokelela kwi-scandal ebizwa ngokuba yi-phone-scoring and closing of the News of the World, enye yeebhanki ezinkulu zeBritani. Ukukhwabanisa kuye kwabangela ukuba kubekho umyalelo omkhulu kumaphephandaba eBrithani.
I-Irish Open Open Golf Tournament kwi-European Tour
Amabanjwa angenangxaki kwi-ADX Supermax Federal prison
Iimfuno zeMpahla yokuSilayam
Ukudibanisa kwe 'Traer'
I-Star Spangled Banner iyaba yiNgqungquthela esisemthethweni
Izinto ezi-5 zokuPhepha kwiNgxoxo-ngxoxo